Qadar oo u wareegtey guddoomiye Mursal kalana hadashay arrimaha doorashada & cidda hoggaaminaysa.
May 2, 2021 Xuseen 2
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Wafdi ka socday dowladda Qatar, wefdtga waxaa hogaaminaayay Ergeyga gaarka ah ee dowladda Qatar Dr. Mutlaq Al-Qahtani.
War-Saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Guddoomiyaha golaha shacabka ee barlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in Guddoomiyaha iyo Ergeyga ayaa ka wada hadleen xaalada guud ee dalka iyo xoojinta xiriirka labada dowladood.
Qodobka kale ee isna dadka doorashadan iyo hannaankeeda qalaad ee lagu hoos wato seegan waa midka kusaabsan duufaanaha isbeddelleda ee mandiqadaha Geeska iyo Bariga Afrika kusoo dullaamaya, uuna kamid yahay isbeddelka dhaqaale ee haatan caalamka intiisa kale qummaatiga ugu hirgalaya.
Shiinuhu waakan caalamka kajeexaya khadad marinno ganacsiyeed ah oo birri iyo baxarba kakooban, kuwaas oo saameyn xooggan kuyeeal doona xiriirka ganacsi iyo diblumaasiyadeed ee aynu dunida kale layeelan doonno marka ay Soomaaliya qummaati iskugudubbadhacdo – waxaana saameyntaas qaabkeeda naqshadeyn doona hannaanka siyaasadeed iyo dawliga ee ay Soomaaliya saldhigan doonto.
Cilaaqadaha ganacsiga caalamiga waxaa haga xiriirka diblumaasiyadeed ee waddamada kadhexeeya. Sida ay haatan wax u dhacayaanna, nidaamkii hore ee kala-ganacsiga dal-ka-dal waxaa beddelay isbahaysiyo dhaqaale oo heer mandiqadeed iyo xataa qaaradeed ushaqeynaya – sida ASEAN, ECOWAS, EEA, MERCOSUR iwm. Geeska iyo Bariga Afrikana isbahaysi noocaas ah ayaa soofoodsaaran oo lagama maarmaan noqonaya, waana kan midka Soomaalida khatarta labaad ee ba’an kunoqon doona.
Halistu waxaa weeye in haddii aysan Soomaaliya haddeer ulaxulufoobin waddamada tunka weyn ee ay sooyaal-wadaagga yihiin sida Turkiga iyo Qadar ay dalalka Geeska iyo Bariga Afrika – gaar ahaanna Kenya, Ethiopia, Uganda iyo inta la bahda ah – kaga awood badnaan doonaan go’aamada iyo talooyinka isbahaysigaas dhaqaale ee mandiqadahan kahirgali doona.
Waana in xisaabtaas lagudarsado inay suuqyada dhaqaale ee dunida ugu cududda weyn sida EEA-da, ASEAN, Shiinaha, Ruuskha, Mareykanka, iyo waddamada kale ee Anglo-Saxonka ahi markasta Kenya, Ethiopia, iyo Uganda kalasaffan doonaan Soomaaliya iyo Jabuutiba. Waxayna codeymuhu udhici doonaan qaabka ah labo waddan oo Soomaaliyeed iyo ilaa affar kale oo kasoo horjeedda.
Xaaladdaas ayaana Ethiopia iyo Kenya ufududeyn doonta inay ciidamadooda badda badaha Soomaaliya qummaati iskugu kala ballaariyaan oo damacoodana kaga dhabeeyaan. Waa haddii hannaankan Galbeediga iyo doorashadiisa inta fiirali’i la iskahaybsado aan Turkiga iyo Qadar toos loolaxulufoobin – siyaasad iyo dhaqaale ahaanba.